Dad isku qoys ahaa oo ku dhintay Qaraxii maanta ee Muqdisho & Wararkii ugu dambeeyay – HalQaran.com
Dad isku qoys ahaa oo ku dhintay Qaraxii maanta ee Muqdisho & Wararkii ugu dambeeyay
by HalQaran Staff	 March 25, 2020 13 Views
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa warar dheeraad ah ka soo baxaya ismiidaamintii Arbacadii maanta ka dhacday meel ku dhow Isgoyska Sayidka, gaar ahaan halkii la oran jiray Baar Bulsho ee Degmada Hawlwadaag.
Qof naftii halige ah oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa bartilmaameedsaday maqaayad inta badan ay fariisin jireen Ciidamada dowladda oo ku taallo Suuq yaraha Sayidka ee Degmada Hawlwadaag.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar (Saalax Dheere) ayaa Saxaafadda u sheegay qaraxaasi inay ku geeriyoodeen saddex ruux oo isu qoys ahaa, kuwaasi oo fadhiyay maqaayadda la beegsaday.
Sidoo kale, waxaa ku dhaawacmay Saddex kale, kuwaasi oo iyagana loo qaaday goobaha Caafimaadka ee Muqdisho, iyadoo tirada dhimashada ay ka dhigan tahay afar ruux marka lagu daro ruuxii naftiisa gooyay ee isqarxiyay.
Maqaayadda Qaraxa Ismiidaaminta lala eegtay ee ku taallo Suuq yaraha Sayidka badanaa waxaa isugu yimaado Ciidamada Militariga dowladda xilliyada ay fasaxa leeyihiin, halkaasi oo ay ku qayili jireen.
Muddooyinkii dambe waxaa aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Muqdisho, wuxuuna ahaa mid wanaagsan oo aysan ka dhicin falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
#Dad isku qoys ahaa oo ku dhintay Qaraxii maanta ee Muqdisho
Previous Post Recurrent stand-off between FGS and Puntland over Federalism
Next Post Wasaaradda Caafimaadka ee XF Somaliya oo soo saartay wacyigelin ku saabsan Cudurka Coronavirus